महिलाले विवाहअगाडि यौ,नसम्पर्क राखेरनराखेको कुरा थाहा पाउन सामान्य मान्छेले पहिलो यौ,न सम्पर्कको बेला र,गत आएरनआएको वा दुखेरनदुखेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने, सोच्ने र बुझ्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर पुरुषमा लिं,गको अगाडिको छाला फाटेरनफाटेको, पछाडिसम्म खुलेरनखुलेको आधारमा यौ,नसम्पर्क भए/नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
माथि उल्लेखित सोच गलत हुन् । खास गरी उमेर पुगेपछिमात्र विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको अहिलेको समयमा माहिलाको यो,नीको मुखमा बाल्यकालदेखि वा जन्मदेखि रहने जालो यौ,नसम्पर्कबाहेक दौडधुप, खेलकुद, पौडी, साइकल चलाउने वा अन्य यस्तै गतिविधिका कारणले पनि फुट्न सक्ने हुनाले पहिलो यौ,नसम्पर्कको बेलामात्रै यो फुटेर र,गत आउनुपर्छ भन्ने कुरा सत्य मान्न सकिँदैन ।
त्यस्तै पुरुषको लिं,गको छाला यौ,नसम्पर्क पछिमात्रै फाट्छ वा खुल्छ भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । त्यसकारण विवाहअगाडि यौ,नसम्पर्क राखे/नराखेको हुरा स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा से,क्स गर्ने व्यक्तिबाहेक अरूले पछि थाहा पाउन सक्दैन ।
यौ,नसम्पर्क राख्दा यो,नी खुकुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो । यो,नी आवश्यकताको बेला रक्तसञ्चालनको कारण आफैँ खुकुलो र कसिलो हुने अं,ग हो । महिलालाई यौ,न उत्तेजना नभएको बेला यो,नीमार्गमा एउटा औँला पनि पसाउन अप्ठ्यारो हुन सक्छ भने यौ,न उ,त्तेजना भएको बेला कुनै पनि आकारको लिं,ग यसभित्र पस्न सक्छ । अझ बच्चा पाउने बेलामा बच्चा पाउने हदसम्म पनि खुकुलो हुन सक्छ ।
जसरी आवश्यक भएको बेलामा यो,नी खुकुलो हुन सक्ने कुरा वैज्ञानिक सत्य हो, त्यसै गरी यौ,नसम्पर्कपछि यो,नीले आफ्नो पुरानै तनाव र आकार ग्रहण गर्ने कुरा पनि वैज्ञानिक सत्य हो । यसका लागि एउटा उदाहरण दिँदा कुरा बुझ्न अझ सजिलो होला । ठूलो गाँस खाना खाएर मुख वा खाएको कुरा पेटसम्म लैजाने खाद्यनली खुकुलो वा ठूलो हुन्छन् र र हुँदैनन् नि । त्यसैले यौ,नसम्पर्कपछि यो,नी खुकुलो हुँदैन । एजेन्सी
के तपाई पर्फेक्ट से’क्स पार्टनर हो ? यसरी थाहा पाउनुहोस्
यौ’न सम्पर्कबाट फैलिने ख’तरनाक चार ब्याक्टेरिया
किन दोहोर्‍याएर यौ*न सम्बन्ध राख्न मन लाग्छ ?
काम वासना के हो ? कसरी आउँछ मानिसको दिमागमा ?
के क्षयरोगका बिरामीले यौ,न सम्पर्क राख्न सुरक्षित हुन्छ?
महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? जानी राखौं